के चित्त बुझेन
भ्रष्ट कर्मचारीहरुले घुस लिदा लिदै रंगे हात पक्रन अख्तियारलाई सघाएको चित्त बुझेन? घुसखोर राष्ट्रका धमिराहरुको पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन? सरकारी काम कार्यालयको अनिमियता र भ्रष्टाचार पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन?
इराक लगाएत अन्य खाडी मुलुकमा बेचिएकी नेपाली चेलिको चीत्कार सुनेर माइती बनेर उद्दार गरेको चित्त बुझेन? सरकारी र सरोकार ब्यक्तिहरुको अव्यवस्थित, अस्तब्यस्त र लापरवाही लाई सचेत र सजग गराएको चित्त बुझेन?
अपराधी, दलाल र तस्करीहरुलाइ खुल्ला चुनौती दिदै धावा बोलेको बुझेन? गरिब दिन दु:खीहरु माथी भएको अन्याय र अत्याचारको निम्ति सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरेको चित्त बुझेन?
आमा बुबा सरहका वृद्ध बृद्दालाई रुवाएर ठगेर बिदेश पलाएन हुनेहरुको पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन? अखाद्य सामाग्री बिक्री बितरन गर्ने ब्यबसायिहरुको पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन?बिदेशम दु:ख परेर अलपत्र परेका नेपालिहरुको उद्दारको निम्ति पहल गरेको चित्त बुझेन?
हस्पिटलको चरम लापरबाहीले मान्छेको ज्यान लिएको बिषयलाई पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन? हस्पिटल र गाउँ गाउँको स्वास्थ्य चौकिमा औसधिको अभाब हुँदा सम्बधित मन्त्रालयमा जानकारी गराएको चित्त बुझेन?
यौन पिपाशु बलात्कारीहारुलाइ रङ्गेहात पक्रन पुलिस प्रशासनलाई मद्धत गरेको चित्त बुझेन?* जनतालाई ट्याक्सी माइक्रो चलकले र चालकहरुलाइ पटके करहरुमा बढी रकम अशुली गरेको पर्दाफास गरेर सचेत गराएको चित्त बुझेन?
पद, पैसा र पावरको आडमा अरुको सम्पती वा पैसा अशुल गरेको ज्यादती गरेको पर्दाफास गरेको चित्त बुझेन?
स्वतन्त्र पत्रकारिता गरेर परोपकारी कार्य गरेको चित्त बुझेन? जनताको सानो सानो समस्या सुनेर समाधानको लागि निरन्तर फलो अप गर्दै सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तीलाई झकझकाएको चित्त बुझेन?फोहोरी घिनलाग्दो राजनितीलाई सफा गर्न खराब तत्वहरु बिरुद्ध आगो ओकलेर खबरदारी गरेको चित्त बुझेन?
समस्यामा परेका निर्दोष ब्यक्तिहरुलाइ न्याय दिलाउन र अाँशु पुछ्न दत्तचित्त भएर निर्वार्थ र निस्पक्ष लागिपरेको चित्त बुझेन?एअरपोर्ट सेतिङ गरेर दुबइ लगाएत अन्य मुलुकमा ठुलो रकम लिइ मानव तस्करहरुको पोल खोलेको चित्त बुझेन?
बाढिको कारण दुबानमा परेर घरबार बिहिन भएका तराईबासि दिन दु:खीको बासको लागि बस्ती निर्माण गरेको चित्त बुझेन?
देशकै दुरदराज विकट कर्णाली कालिकोट जिल्ला ।लेखक यम श्रेष्ठ समय सान्दर्भिक सुर्य ।